Zandary maty tany Anjozorobe : « Haka ny rahalahiny izy », hoy ny Jly Ravalomanana | NewsMada
Zandary maty tany Anjozorobe : « Haka ny rahalahiny izy », hoy ny Jly Ravalomanana
Niera haka ny rahalahiny any Anjozorobe ny nialan’ilay zandary maty voatifitra tany an-toerana. Mpiambina manokana ny Jly Ravalomanana izy io, izay nohamafisiny fa fantatry ny lehibeny tsara ny anton-diany.
Naneho hevitra omaly ny Jly Ravalomanana nandritra ny fifampiarahabana nahatratra ny taon’ny zandarimaria sy ny sekretera jeneraly miadidy ny zandarimaria momba ny zava-nitranga tany Ankaraoka Ambatomanoina distrikan’Anjozorobe. Mpiambina manokana azy rahateo ilay zandary maty ka nahavoatonontonona ny anarany. Nambaran’ny Jly Ravalomanana fa niera taminy haka ny rahalahiny any Anjozorobe ity zandary mpiambina azy manokana ity. “Niera tamiko izy ary nanontaniako tsara ny antondiany ary nilaza fa haka ny rahalahiny ary hiverina haingana”, hoy ny fanazavana.
Nambarany ihany koa fa efa nitantara taminy ny olana momba io rahalahin’ilay zandary io taminy izy, ary efa nampandre ny lehiben’ny CIRGN sy ny kaomandin’ny zandary faritra Analamanga ny amin’io dian’ny mpiambina azy io. “Efa nahalala tsara ny fahatongavan’ity zandary mpiambina ity any Anjozorobe ny lehibe isan’ambaratongany. Misy porofo izany ary voarakitra anaty hafatra anaty finday ny resaka sasany nifanaovana”, hoy ny fanazavana.
Tsy fantatra mazava izay tena niseho tany an-toerana fa ny avy amin’ny zandarimaria, efa nanome fanazavana ny alahady teo fa nisy andiana “gros bras” tany Ankaraoka ary nitifitra ny zandary sy vadintany mpanatanteraka didy. Mitaky ny hanaovana fanadihadiana lalina momba ity raharaha ity ny fianakavian’ny maty. Ny teo anivon’ny Seg efa nilaza omaly fa misokatra ny fanadihadiana. Toe-javatra somary mamohehatra ihany izao satria ny zandary samy zandary ihany no mifamono mifampitifitra. Ry zareo natao ho maodely sy hitsikitsika hivavahana, zary lasa manao toetra mahamenatra. Tsy manaraka fitsipi-pifehezana ny zandary sasany? Mety efa tsy voafehy ihany koa, ka mety atahorana ny mety mbola hiitaran’izany amin’ny zavatra hafa.